Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga iyo xiriirka labada dal
By VILLA SOMALIA
Jabuuti, Ogoosto 16, 2018; Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa booqasho rasmi ah oo labo cisho qaadaneysa ku tagay Jamhuuriyadda Jabuuti.
Madaxweynaha oo si heersare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Jabuuti ayaa qasriga madaxtooyada dalkaas wadahadallo kula yeeshay dhiggiisa Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle.
Labada Madaxweyne ayaa ka arrinsaday xoojinta xiriirka walaaltinimo ee labada dal, kor u qaadista iskaashiga ku aaddan arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo guud ahaan qadiyadaha wadajirka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti.
Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Axmed Cabdi ayaa sheegay in Madaxweynuhu uu bogaadiyey garab istaagga joogtada ah ee Madaxda iyo Shacabka aan walaalaha nahay ee Jabuuti ay u fidiyaan Soomaaliya, gaar ahaan xilliyadii adkaa ee uu dalku soo maray.
“Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahadceliyay Madaxweynaha Jabuuti kaalintii uu ka geystay nabadeynta iyo dowlad-dhisidda Soomaaliya. Sidoo kale, Dowladda Jabuuti waxa ay uga mahad-celisay Soomaaliya kaalinta ay ka qaadatay halgankii xorrnimo-doonka dalkaas.” Ayuu yiri Wasiirku.
Diblumaasiyiinta Soomaaliya ee qeybta ka ah wafdiga Madaxweynaha ayaa kulammo la yeeshay dhiggooda dalka Jabuuti, iyagoona isla meel dhigay sidii loo sii amba-qaadi lahaa heshiisyada hore ay u kala saxiixdeen labada dal.
Madaxweynaha waxaa booqashadan ku weheliya, Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirixmaan Ducaale Beyle, Wasiirka Arrimaha Gudaha, Dib u heshiisiinta iyo Federaalka Mudane Cabdi Maxamed Sabriye, Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Mudane Cabdi Cashuur Xasan, Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah Mudane Cabdulqaadir Axmed Cabdi iyo Wasiiru Dowlaha Gaashaandhigga Mudane Maxamed Cali Xagaa.
Farmaajo oo casho sharaf u sameeyay Geelle iyo wafdigiisa
War Saxaafaded 17.03.2019. 06:24
Madax kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka qeybgashay munaasabadda.
Saraakiil katirsan ilaaladda Villa Somalia oo loo xiray tacadi ay u geysteen Suxufiyiin
Soomaliya 22.02.2019. 22:02
Amiirka Qadar oo la kulmay Wasiirka difaaca Somalia [Maxay kawada hadleen?]
Soomaliya 24.01.2019. 12:01
Boqor Salman oo martigelinaya saxiixa heshiiska Ethiopia iyo Eritrea
Afrika 16.09.2018. 13:24
Farmaajo oo u safray Turkiga [Akhriso sababta]
Soomaliya 17.08.2018. 13:08
Farmaajo oo Puntland ka codsaday Marti-gelinta Shirka DFS iyo Maamullada [Sawirro]
War Saxaafaded 28.01.2019. 22:29
Maxaa looga hadlay Kulankii Farmaajo iyo Geelle?
War Saxaafaded 24.10.2017. 19:25
Farmaajo iyo Geelle oo kulan gaar ah yeeshay [Maxay kawada hadleen?]
War Saxaafaded 16.03.2019. 15:49
Farmaajo oo cadeeyay mowqifka Soomaaliya ee xaalada Suudaan 24.04.2019. 07:04
Maxkamad amartay in ay waqti badan la hurdo siiyo maxaabiis 24.04.2019. 06:48
Taariikhda sarkaalka Al-Shabaab ah ee Muqdisho laga dejiyay [Sawirro] 24.04.2019. 06:23
Masar oo ka taageeraysa Puntland tayaynta garsoorka iyo amaanka 23.04.2019. 23:34
Sarkaal Shabaab ah iskana dhiibay Jubbaland oo Muqdisho la keenay 23.04.2019. 19:55
Puntland iyo Sacuudiga oo iska kaashanaya Amniga iyo Maalgashiga 23.04.2019. 17:20